Russell Crowe iyo Zac Efron ayaa qeyb ka noqon kara filimka soo socda ee Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Russell Crowe iyo Zac Efron ayaa qeyb ka noqon kara filimka soo socda ee Apple TV +
Sida ay sheegeen wiilasha Dedline, Istuudiyaha Apple ayaa gorgortamaya xuquuqda u hel filim cusub loogu talagalay barnaamijkeeda fiidiyowga ee qulqulaya, inkasta oo wax waliba wali hawada ku jiraan. Waxaan ka hadleynaa filimka The Greater Beer Run Ever, oo ah filim uu hagayay Peter Farrelly (Buugga Cagaaran).
Jilayaasha filimkan cusub, oo aan isna xirnayn, waad heli lahayd Zack efron (The Great Showman, Baywatch) iyo Russell Crowe (Gladiator). Bill Murray (Dhagaxyada, Luminta tarjumaadda, Ghostbusters) sidoo kale wuxuu heli lahaa naftiisa gorgortan door taageero ah.
Filimkan cusub wuxuu ku saleysan yahay buugga Biirkii Ugu Wanaagsanaa Ee Abid: Xusuusin Saaxiibtinimo, Daacadnimo iyo Dagaal oo ay qoreen Chick Donahue iyo JT Molloy. Qoraalka waxaa qoray Peter Farrley, Pete Jones iyo Brian Currie. Soo saariddu waa istudiyaha Skydance oo ay kasoo muuqdaan David Ellison, Don Granger iyo Dana Goldberg.
Beer Run wuxuu sheegayaa sheekada Donahue markii uu ka tagay New York sanadkii 1967 si uu biir ugu keeno saaxiibadiisii ​​yaraa ee militariga ee ka dagaalamayay Vietnam.
Donohue wuxuu qaatay fikrad wanaagsan ilaa xad dhaafka ah, isagoo ku garaacaya markab ganacsi oo Ganacsi leh, ka dibna wuxuu ku dhex rarayaa khamriga hawdka isagoo isku dayaya inuu helo seddexdiisa saaxiib.
Isaga oo xiran dharka Hawaiian iyo funaanado, waxaa lagu qalday CIA-da, taas oo fududeysay dadaalkiisa. Ugu dambeyntiina, markii uu dhammeeyay xirfaddiisa biirka, Tet Offensive ayaa dhacay.
The Tet Offensive wuxuu ahaa hawlgal militari oo ay sameysay dowlada Vietnam waxaana fuliyay Vietnamcong 1968-kii oo ka dhan ahaa xoogaggii xulufada ahaa ee uu hogaaminayay Mareykanka, weerarkaas oo ahaa mid fashilmay laakiin argagax geliyay shacabka Mareykanka wuxuuna ahaa bilowgii dhammaadka wadahadalada si dagaalka loo joojiyo.
Doorka Donahue, Zack Efron wuu is arki doonaa, haddii uu ugu dambeyn helo doorka. Mashruucan cusub ayaa qorshaystay ibilow duubista bisha soo socota ee Ogosto inta udhaxeysa New Zealand iyo Australia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Russell Crowe iyo Zac Efron ayaa qeyb ka noqon kara filimka soo socda ee Apple TV +
Apple waxay mar kale xaqiijineysaa inay u hoggaansameyso Isbahaysiga Iskaashatada Biyaha